“Farmaajo mushkilada ayuu qeyb ka yahay” | KEYDMEDIA ONLINE
“Farmaajo mushkilada ayuu qeyb ka yahay”
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Farmaajo ku tilmaamay fidno ka taliye hor taagan in la gaaro xal loo dhanyahay oo lagu aado doorasho la is oggol-yahay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in tan iyo markii la doortay Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo uu ka shaqeynayay xasarad kicin iyo xiisad abuur isla markaana uu diidanaa in la raadiyo xal loo dhan yahay si looga gudbo xaaladaha cakiran oo marba marka ka danbeeysa circa isku shareereysay.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in ay Farmaajo uga leexdeen afrtiisi sano ee dhamaatay oo aysan ka faragilin isla markaana uu ku fashilmay wax ka qabashada Arrimhiihii Mandate-kiisa ahaa, “Madaxweynihii hore mushkilada ayuu qeyb ka yahay ee xalka qeyb kama aha” ayuu yiri.
Wuxuu layaab ku tilmaamay in Farmaajo uusan dan ka lahayn amniga dadka shacbka ah ee Muqdisho ku dhaqan isla-markaana sii ciqaabayo isagoo ka xiraya waddooyinkii uu muhiimsanaa ciidamadii sugi lahaa amniga shacabkana u daad gureeynaya gobloka Gedo.
“Qofka Soomaaliga ah ee caqligiisu fayaw-yahow maxaad ku macneyneysaa in xalay dhagax lagu jaray wadada Dabka amni darro awgeed, saakana ciidamo loo qaaday gobolka Gedo?” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Farmajo ayaa ka soo dhaqaaqay shirkii billowgi bishaan Dhuusamareeb kaga furmay isaga iyo Hoggaanka Maamul Goboleedyada iyadoo Madaxda kale oo dhan ay ku sugan yihiin magaalada diyaarna ay u yihiin in la gaaro heshiis loo dhan yahay taas ayaana sii bari-taareysa hadalka Xasan Sheekh Maxamuud.